Akwụkwọ Ozi E Degaara Ndị Rom 2:1-29
Ikpe Chineke ga-ekpe ndị Juu na ndị Grik (1-16)
Otú akọnuche si arụ ọrụ (14, 15)
Ndị Juu na Iwu Mosis (17-24)
Úgwù e biri n’obi (25-29)
2 N’ihi ya, onye ọ sọkwara gị bụrụ, e nweghị otú ị ga-esi ekwu na aka gị dị ọcha+ ma ọ bụrụ na ị na-ekpe mmadụ ikpe. N’ihi na mgbe ị na-ekpe onye ọzọ ikpe, ị na-ama onwe gị ikpe maka na ị na-emekwa ihe onye ị na-ekpe ikpe na-eme.+ 2 Ma anyị ma na Chineke na-ama ndị na-eme ihe ndị ahụ ikpe, ikpe ọ na-ekpe zikwara ezi.* 3 Ma ì chere na ị ga-agbanahụ ikpe Chineke ebe ọ bụ na ị na-ekpe ndị na-eme ihe ndị ahụ ikpe ma na-emekwa ihe ndị ha na-eme? 4 Ka ị̀ na-eleda obiọma Chineke+ na ntachi obi ya+ na ndidi ya+ dị ukwuu anya maka na ị maghị na ọ na-achọ inyere gị aka ka i chegharịa maka na ọ dị obiọma?+ 5 Ma ebe ọ bụ na ị na-eme isi ike ma jụ ichegharị, ihe a ị na-eme ga-eme ka Chineke wesa gị iwe n’ụbọchị iwe ya nakwa n’ụbọchị ọ ga-eme ka a mata ikpe ya ziri ezi.+ 6 Ọ ga-akwụkwa onye ọ bụla ụgwọ ọrụ ya.+ 7 Ọ ga-enye ndị tachiri obi na-arụ ọrụ dị mma ndụ ebighị ebi, ya bụ, ndị na-achọ ebube na nsọpụrụ na ahụ́ na-agaghị ere ure.+ 8 Ma ọnụma ya na iwe ya ga-abịara ndị na-ese okwu na ndị na-enupụrụ eziokwu isi ma na-erubere ajọ omume isi.+ 9 Mkpagbu na ahụhụ ga-abịara onye* ọ bụla nke na-eme ihe ọjọọ. Ọ ga-ebu ụzọ bịara onye Juu, bịakwara onye Grik. 10 Ma onye ọ bụla nke na-eme ihe dị mma ga-enweta ebube na nsọpụrụ na udo. Onye Juu ga-ebu ụzọ enweta,+ onye Grik enwetakwa.+ 11 N’ihi na Chineke anaghị ele mmadụ anya n’ihu.+ 12 Ndị niile mehiere mgbe a na-enweghị iwu ga-anwụ n’agbanyeghị na e nweghị iwu.+ Ma ndị niile mehiere n’agbanyeghị na e nwere iwu, a ga-eji ihe e dere n’iwu kpee ha ikpe.+ 13 N’ihi na ọ bụghị ndị na-anụ ihe e dere n’iwu bụ ndị ezi omume n’anya Chineke, kama ọ bụ ndị na-eme ihe e dere n’iwu ka a ga-akpọ ndị ezi omume.+ 14 N’ihi na mgbe ndị mba ọzọ, ndị na-enweghị iwu,+ ji aka ha na-eme ihe e kwuru n’iwu, ha bụụrụ onwe ha iwu n’agbanyeghị na ha enweghị iwu. 15 Ọ bụ ha na-egosi na e dere iwu ahụ n’obi ha, akọnuche ha sokwa ha na-agba àmà. Echiche ha na-agwa ha mgbe ha mere ihe na-adịghị mma na mgbe ha mere ihe dị mma. 16 Ihe a ga-eme mgbe Chineke ga-esi n’aka Jizọs Kraịst kpee ụmụ mmadụ ikpe maka ihe ndị ha zoro ezo.+ N’eziokwu, ọ ga-eme otú m na-ezisa ya n’ozi ọma. 17 Ma gị onye sịrị na ị bụ onye Juu,+ ị tụkwasịrị iwu obi, jirikwa Chineke na-anya isi. 18 Ị ma uche ya, na-aghọtakwa ihe ndị dị ezigbo mma n’ihi na a kụziiri gị Iwu ahụ.*+ 19 Obi sikwara gị ike na ị na-ezi ndị kpuru ìsì ụzọ, na ị bụụrụ ndị nọ n’ọchịchịrị ìhè, 20 na ị na-akụziri ndị na-enweghị ezi uche ihe, na-ezi ụmụaka ihe, marakwa ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ na eziokwu ndị dị n’Iwu ahụ.* 21 Ma, gị onye na-akụziri onye ọzọ ihe, ị̀ na-akụzikwara onwe gị?+ Gị onye na-ezisa, sị, “Ezula ohi,”+ ị̀ na-ezu ohi? 22 Gị onye na-asị, “Akwala iko,”+ ị̀ na-akwa iko? Gị onye na-asọ arụsị oyi, ị̀ na-ezu ihe dị n’ụlọ arụsị? 23 Gị onye ji iwu anya isi, ị̀ na-ada Iwu ahụ,* si otú ahụ na-eleda Chineke anya? 24 N’ihi na “ndị mba ọzọ na-ekwulu aha Chineke n’ihi unu,” otú e dere na ha ga-eme.+ 25 N’eziokwu, ibi úgwù+ bara uru naanị ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe e kwuru n’iwu.+ Ma ọ bụrụ na ị na-ada iwu, ị bụzi onye a na-ebighị úgwù n’agbanyeghị na e biri gị úgwù. 26 N’ihi ya, ọ bụrụ na onye a na-ebighị úgwù+ na-eme ihe ndị Chineke kwuru e dere n’Iwu ahụ,* ọ̀ bụ na a gaghị ewere onye ahụ a na-ebighị úgwù ka onye e biri úgwù?+ 27 Onye a na-ebighị úgwù n’ahụ́ nke na-eme ihe e kwuru n’Iwu ahụ* ga-ekpe gị ikpe ebe ọ bụ na e biri gị úgwù n’ahụ́, nyekwa gị iwu ahụ e dere ede, ma ị naghị edebe ya. 28 N’ihi na ọ bụghị onye bụ́ onye Juu n’ahụ́ bụ onye Juu,+ ọ bụghịkwa úgwù e biri n’ahụ́ bụ ibi úgwù.+ 29 Kama, ọ bụ onye bụ́ onye Juu n’obi bụ onye Juu,+ úgwù e biri ya bụkwa n’obi.+ E si na mmụọ nsọ bie ya úgwù, e sighị n’iwu e dere ede.+ Ọ bụ Chineke na-aja onye ahụ mma, ọ bụghị mmadụ.+
^ Na Grik, “dabara n’eziokwu.”